alanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Manchester United v Tottenham. - jornalizem
alanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Manchester United v Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa raadineysa inay guushii ugu horeysay ku gaarto Old Trafford horyaalka Ingariiska tan iyo 1989kii, halka Jermaine Defoe uu isna raadinayo inuu helo maanta goolkiisii 200aad ee intii uu kubada cagta ciyaarayay.
Kulanka: Manchester v Tottenham
LINE-UPKA MACQUULKA AHMANCHESTER UNITED
Manchester United ayaa weli la dhibtooneysa dhaawacyo, gaar ahaan daafaca iyadoo Nemanja Vidic, Cris Smallng iyo Phil Jones ay dhaawac yihiin, lakiin Sir Alex ayaa weli awooda inuu soo xusho ciyaartoy badan oo ka mid ah ciyaartoydiisa joogtada ah.
Khadka dhexe ciyaartoyda la hubo inay maqnaanayaan waa Ashley Young iyo Antonio Valencia, taasoo la micno ah in Nani uu ka sii mid ahaan doono line-upka inkastoo la bedelay xilligii nasashada kulankii Liverpool.
Wayne Rooney ayaa u muuqda mid ku soo laabanaya line-upka kooxda ka dib dhowr isbuuc uu la maqnaa dhaawac ka gaaray meel ka sareysa jilibkiisa, waxaana uu ku soo bilowday kulankii League Cup ee Newcastle.
Andre Villas-Boas ayaa isna walwalkiisa gooniga ah ee dhanka dhaawaca qaba ka hor kulankaan, iyadoo dhibaatada inteeda badan ay ka heysato dhanka daafaca.
Benoit Assou-Ekotto, Younes Kaboul iyo Scott Parker ayaa iyaga weli dhaawac la maqan, inkastoo Kyle Naughton laga yaabo inuu diyaar noqdo, lakiin waxa ay u badan tahay inaan lagu qamaari doonin islamarkaana Jan Vertonghen loo dhaqaajin doono dhanka bidix.
Sida Naughon, Emmanuel Adebayor ayaa isna laga yaabaa inuu diyaar noqdo, lakiin inuu ku soo bilowdo ayaan aheyn wax ay u badan tahay marka loo fiiriyo qaab ciyaareedka fiican ee uu ku raaxeysanayo Jermain Defoe, halka Clint Dempsey isna laga yaabo inuu booska kubadsameeyaha kala baxo Gylfi Sigurdsson.
Manchester United ayaan laga badinin 22kii kulan ee u danbeysay ee ay Premier League la kulmaan Tottenham , iyagoo badiyay 17 kulan oo ka mid ah.
Spurs ayaa dhalisay kaliya hal gool oo ka mid ah 8dooda gool ee horyaalka qeybta hore ee ciyaar, halka qeybta labaad aysan jirin koox ka badan inta ay dhaliyeen goolal.
Dhinaca kale sida United lagu yaqaano, seddex u meel goolasha ay dhaliyeen xilli ciyaareedkan horyaalka waxa ay dhaliyeen 15ka daqiiqo ee ciyaaraha ugu danbeeyay.
Hadii Jermain Defoe uu gool ku dhaliyo Old Trafford, waa goolkiisii 200aad ee mustaqbalkiisa ciyaareed.
United ayaa kaliya looga badiyay garoonkooda labo jeer intii ay la ciyaarayeen Spurs tan iyo 1981dii, waxaana labada jeerba shabaqa soo taabtay Gary Lineker, oo haatan wada barnaamijka Match Of The Day ee ka baxa BBC.
Lixdii kulan ee ugu danbeysay ee uu ka horyimaado Spurs, Robin van Persie ayaa ka dhaliyay shan gool, waxaana uu caawiye ka ahaa afar gool.
Isagoo ka dhaliyay 10gool, Ryan Giggs kama uusan dhalin goolal ka badan intaas koox kale oo aan ka aheyn Spurs.
Booqashadiisii ugu danbeysay ee Old Trafford ee isagoo tababare ah Andre Villas-Boas waxa uu ka soo qaatay guuldarro 3-1 isagoo macalin u ahaa Chelsea.